I-Phaseolin powder (13401-40-6) hplc =98% | I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / I-Phaseolin powder
SKU: 13401-40-6. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwintlawulo ye-Phaseolin powder (i-13401-40-6), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Phaseolin powder i-glycoprotein enqwelweyo eqokelela kwiiprotheni zokugcina izityalo zeenyosi eziqhelekileyo (i-Phaseolus vulgaris L.) imbewu. Ukuxhatshazwa kwe-proteolytic degradation kuya kuba yinto ebalulekileyo ye-phaseolin powder yangomthonyama, okuvumela ukuqokelela kwayo ngokuzinzileyo kwi-vacuoles yokugcina iprotheni.
Phaseolin powder ividiyo
I-Raw Phaseolin powder ezisisiseko
igama: I-Phaseolin powder
I-molecular Formula: C20H18O4
Isisindo somzimba: 322.358
I-Raw Phaseolin powder ekujikelezweni kwesisindo somzimba
I-Phaseolin powder (i-CAS 13401-40-6)
Ukusetyenziswa kwePlawolin powder
I-Phaseolin powder yi-glycoprotein ene-trimeric eqokelela kwiiprotheni zokugcina izityalo zeenyosi eziqhelekileyo (i-Phaseolus vulgaris L.) imbewu. Ukuxhatshazwa kwe-proteolytic degradation kuya kuba yinto ebalulekileyo yePalololin yangokwesibhakabhaka, evumela ukuqokelela kwayo ngokuzinzileyo kwi-proteol storage vacuoles. Ukufunyanwa kweprotease-resistant structure kudibaniswa kwindibano yee-subseits ze-Phaseolin powder ku-trimers, inkqubo ekhawulezayo neyenzileyo eyenzekayo kwi-endoplasmic reticulum. Kwiiseli ezixutywe ngamabhontshisi I-Phaseolin i-powder powder-trimerization inokuthi incediswe ngamagciwane kwaye iyenzeka kwakhona phambi kwe-inhibitors ye-N-linkedly glycosylation. Inkqubo enikezelwe ukugcinwa kwamagumbi amanqanawa angabonakaliyo kunye neendlela ezihamba phambili kwiqumrhu elikudala kwindlela yokuqinisekisa ukuba kuphela iprotease-resistant form of protein ethathwa kwi-vacuoles yokugcinwa, okufaka isandla ekusebenzeni ngokubanzi kwe-protein storage.
Isilumkiso kwi-Raw Phaseolin powder
Iingqungquthela, amagunya e-enzyme-block blocking amancinci anciphisa inani leekhalori ezinokwakheka kwe-carbohydrate ezixutywe kwaye ziguqulwe zibe ngamafutha omzimba. Ayikwazi ukuphula i-sugar to go to sugars, i-digestive system ikhupha i-starest digested during the movements. Uphando oluqhutywe kwiYunivesithi yaseCalifornia luchaza ukuba i-phaseolamin inqanda okanye ilibazise ukugutywa kwezilwanyana ezinzima, ngaloo ndlela ukunciphisa ubunzima bobunzima kunye nobukhulu bomlenze obandakanyekayo. Nangona ezinye iinqatha-ezinqamlekileyo ezifana ne-orlistat (igama lohwebo u-Alli) livelisa iziphumo ezimbi ezinomdla ngenxa ye-enzyme-yokukhusela umsebenzi, ezininzi izilingo zekliniki ziye zabonisa iziganeko ezincinci zesifo sohudo kunye nentlungu yesisu phakathi kwabasebenzisi be-phaseolamin.
Ukunciphisa Inkcazo yeGlycemic Index
Ngenxa yokuba umboniso omhlophe weentsontshi omhlophe uphazamisa ukuxutywa kwe-carbohydrate kunye nokuguqulwa kwawo kwi-ushukela elula, kunokunikela uncedo lwe-diabetes kunye ne-hypoglycemia esebenzayo. UDkt. Jay Udani-umlawuli wezeMpilo we-Medicus Research kunye nombhali we-2007 University of California ekufundeni kwePaseolin powder eluhlaza (CAS 13401-40-6) -wacebise ukuba i-compound inganciphisa isalathisi se-glycemic yokutya kwesitashi ezifana nesonka esimhlophe . Ngokuphazamisa amandla omzimba ekufumaneni i-glucose kule ndawo yokutya, i-Phaseolin powder inokuthintela i-spikes ngokukhawuleza kwi-ushukela wegazi kunye neengxaki ezibangelwa. Ukongezelela, ukuxhaswa ngokuqhelekileyo kunokuthintela okanye ukulibazise ukuqala kohlobo lwe-2 sikashukela kubantu abane-hypoglycemia esebenzayo (ngaphambi kwesifo sikashukela). Nangona ezi zinto zibonakala zithembisa ukuba zithembisile, aziphandulwanga yizilingo ezinkulu ezikliniki.
I-Phaseolin powder, iprojekti enkulu ye-globin yokugcina imbewu yeembotyi eziqhelekileyo, i-Phaseolus vulgaris L., i-akhawunti ukuya kwi-50% yeprotheyini yenani elipheleleyo. Ukuqokelela ngokukhawuleza kwe-Phaseolin powder kwiimbewu ezikhulayo kuqala malunga neentsuku ze-14 emva kokugquma kunye nokuqhubeka kweentsuku ze-12-14. Nangona kunjalo, isixa kunye nesantya se-Phaseolin eqongelelweyo yokuqokelela i-powder, ehambelana nokuhlukahluka kokuqala, ubude, ukupheliswa, kunye nezinga lokuqala, kuboniswe ukuhluka phakathi kwama-genotype. I-3 kuphela i-100 i-powder i-types electrophoretic, i-T, i-S, kunye no-C emva kweemveliso ze-Tendergreen, iSanilac, kunye ne-Contender, ngokulandelanayo, ziye zachongwa phakathi kwe-XNUMX yokuveliswa.
Amanqanaba amancinci amilinganiselo e-molecular and pointelectric points ze-14 protein ze-polypeptides zePetololin powder, kunye ne-homology ephawulwe kwi-peptide mapping, iphakamisa ukuba i-Phaseolin i-polypeptide eluhlaza i-polypeptide efana neeprotein. Ngokusekelwe kwimiphumo yeziphambano phakathi kweemifuno ezineendlela ezintathu ze-electrophoretic, iigenesi ezilawula ii-polypeptides nganye ze-Phaseolin iintlobo ezinobumba obugqithisiweyo zibonakala zixinyiwe, zizuzwe kwi-block kunye ne-alleles zininzi. Uhlobo oluthile lwe-Phaseolin powder content, ngokusekelwe kuqikelelo usebenzisa i-rocket immunoelectrophoresis, luye lwafunyanwa phakathi kweetayini. Nangona uninzi lwahlula abantu lubonisa ukusabalalisa okuqhubekayo kunye nelifa elincinci, ezinye iimizila zangasemva ezingenayo i-Phaseolin eqongelelanisiweyo yokuqokelela i powder zibonakala ziphethe iizakhi ezincinane kunye nemiphumo emibi. Ijethi enye eyanciphisa umlinganiselo we-Phaseolin powder ukuya ngaphantsi kwesigamu samazinga aqhelekileyo sele ichongwe ngoku kutshatyalaliswa kwendawo yaseP. vulgaris.
I-Phaseolin powder I-Raw Powder (i-CAS 13401-40-6)
I-Raw Phaseolin powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Phaseolin powder (i-CAS 13401-40-6) esuka kwi-AASraw
I-Phaseolin powder I-Raw Powder Recipes
I-Methenolone Inanthate powder
I-JP104 powder (887264-45-1)